Inta aynaan akhriyin Q.2aad ee qormadii cinwaankeedu ahaa (Shirka Jigjiga – Miyir Daboolanka Muquunsan) ee qoraaga maqalka mudane Bashiir Yusuf uu sida xikmada leh uga faalooday, waxaa jira kayd badan oo shirkaa intuu socday si toos ah ugu soo dhacayay wakaaladda oo dad goobjoog ka ahaa ay nala soo socodsiinayeen. Waxyaabaha ka dhacay halkaa ee ama bahdilaad ah ama wax dadkii meesha joogay ka fajiciyay ah lama soo koobi karo. Waxaase jira dad ka mid ahaa odayaashii loo yeedhay oo ilaa hadda aan la ogayn meel ay jiraan oo intay shika ka baxeen dhexda loo joogsaday.
Waxaa jirtay maalintii 3xaad ee shirka inay odayaal gaadhaya 40tameeyo inay u adkaysan waayeen anshaxdarada ka socota meesha oy ka dareereen. Cabdi iley ayaa hoos ka diray ciidankiisii oo ku amray in marka ay ka qarsoomaan madasha shirka in la qabto oo la mariyo ciqaab ay isla yaqaanaan. Sidii ayay yeeleen eydii u tababarnayd oo odayaashii dhexda ayaa loo galay. Maalintii xigtay waxaa shirkii ku soo noqday 18 ka mid ahaa odayaashii baxay oo iyagu qaraacii u adkaysan waayay kuna baryootamay inay ka hadli doonaan shirka oo sida laga doonayo u dhaqmi doonaan. Intii soo hadhay ilaa hadda lama ogsoona meel ay ku sugan yihiin. Eheladoodii qaarkood oon la hadalnay waxay noo sheegeen in markii ay ka dabatageen lagu yidhi hadii la’idinka maqlo mar dambe idinkana waa la’idin waayi.
Hadaan intaa ku dhaafno xogtan, Q2aad ee maqaalka Bashiir wuxuu cinwaan uga dhigay qisadi –Asxaabul Ukhduud- oo ahaa dadkii uu boqoka markay diideen inay u aqoonsadaan inuu ilaahood yahay uu dabka ku guray. Qisadaa waxaa ka mid ah sida uu rasuulka CS noo sheegay inuu ku jiro 3ex ilmood oo hadlay iyagoo dhabarka lagu sido. Wiilkaa hooyadii oo ka mid ahayd kuwa dabka la rabo in lagu rido ayuu dhabarkeeda saarnaa, markaasay ileen waa hooyee u naxday isagii oy damacday inay dabka ka noqoto. Hasa ahaatee Ilaahay ayaa ka hadliyay wiilkii oo yidhi; Hooyo sabir oo gal dabka aniga ha’ii nixine.
Gumaysiga dhibaatada uu ku hayo shacabka S.Ogadenya ma’aha arin la moogyahay. Waxayna ka mid tahay dhaqanada gumaysiga, in loo dulqaato dhibaatada gumaysiga iyo adeegayaashiisa waa wadada loo maro Xoriyada, mana jirto –Wada Sahlan oo Loo Maro Gobanimo , sida uu sheegay Abwaanka xornimadoonka caalamka mudane Nelson Mandella.